Wax Ka Ogoow Xidigaha Ku Lugyeeshay Goolasha Ugu Badan 2021.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWax ka ogoow xidigaha ku lugyeeshay goolasha ugu badan 2021.
February 6, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Sanadka 2021 xidigo badan ayuu noqday Mid dahabi ah waxaana ay soo bandhigeen qaab ciyaareedyi cajiib ah waxaan warbixintaan ku egeynaa 10 ka xidig ee dhaliyey goolasha ugu iyo wiliba caawinta.
Xidiga ugu horeeyo ee sanadkaan u wanaagsan yahay waaan antonio Griezmann kaas oo barcelona siiyey 6 gool sidoo kalena caawiyey Lix kale.
Xidiga labaad ee kasuu xiga waa weeraryahanka bayer munich Roberto Lewandowski kaas oo dhaliyey 7 gool sidoo kalena caawiyey 2 gool sanadka 2021.
Xidiga sedexaad waa andre Silva oo dhaliyey 7 gool sidoo kalena caawiyey 1 gool sidoo kale xidiga afaraad waa xidiga wadanka portugal iyo kooxda juventus cristiano Ronaldo ayaa isna sameeyey oo dhaliyey 6 gool sidoo kalena caawiye 2 gool.
Xidiga shanaad waa Maddison oo dhaliyey 4 gool sidoo kalena caawiye 4 kale sanadka 2021 sidoo kale waxaa kusii xiga oo Lixaad ah muniain oo leh 4 gool iyo 4 caawin xidiga kale ee Todobaad waa Sancho oo leh gool iyo afar caawin waxaa uu ka tirsan yahay bilbeo.
Xidiga sideedaad waa Volland oo dhaliyey 4 gool sidoo kale leh 4 caawin waxa uu ka tirsan yahay Manoco xidiga sagaalaad waa xidiga kooxda Sevilla ee en-nesyri oo dhaliyey 7 gool mana sameyn wax caawin ah.
Xidiga ugu dambeeyo warbixinta waa Xidiga argentina iyo barcelona Lionel Messi oo Sanadkaan 2021 dhaliyey 6 gool sidoo kalena caawiyey gool kale.